Glacier Bay National Park any Alaska: Torolalana ho an'ny Travel
Glacier Bay National Park sy Preserve, Alaska
Ny mpahay siansa dia niantso ny Glacier Bay ho laboratoara velona noho ny hafanam-piraisankevitry ny hafanam-po, ny famolavolana ny fifandimbiasana ary ny fitondran-tenan'ny biby. Ny Ice dia nihemotra 65 kilaometatra, namoaka baoritra vaovao, niverina teto an-tany. Ny alder sy ny hazom-boaloboka dia mihamitombo ary ny zavamaniry dia manintona amboadia, aloesy, osy, osy, trondro mainty, ary bebe kokoa. Ny ranomasina ihany koa dia manohana ireo tantsambo amin'ny seza, trozona mofomamy, vorona ary trozona mamono. Sehatra iray izay mendrika ny fitsidihana, indrindra raha tia ny natiora sy ny zavamiaina ianao.
Navoakan'ny Monastera Glacier Bay tamin'ny 25 febroary 1925 ary niorina ho zaridaina nasionaly ary nitahiry tamin'ny 2 Desambra 1980. Nomena tany efitra koa ilay faritra tamin'ny 2 Desambra 1980 ary nantsoina hoe Biosphere Reserve tamin'ny taona 1986.
Ny faran'ny volana Mey ka hatramin'ny tapatapaky ny Septambra dia fotoana tsara indrindra hitsidihana azy. Ny andro fahavaratra dia lava ary mafana kokoa ny mari-pana. Raha ny volana mey sy ny volana no manana masoandro, dia mety mbola matevina amin'ny ranomandry ny onja ambony. Septambra dia matetika no orana sy rivotra.
Ny Centre Visitor dia misokatra isanandro amin'ny faran'ny volana May ka hatramin'ny fiandohan'ny Septambra. Ny endriky ny famoahana dia 24 ora-ora raha ny birao fampahalalam-baovao sy ny bokin'ny Alaska Geographic dia misokatra isan'andro 11 ka hatramin'ny 9 hariva
Ny saha dia tsy misy afa-tsy sambo na fiaramanidina. Manomboka amin'ny Juneau, manaova sidina mankany Gustavus, dia alaivo ny bisy mankany Glacier Bay Lodge sy Bartlett Cove Campground. Ny Alaska Airlines dia manolotra tolotra jetin-tserasera isan'andro avy any Juneau mankany Gustavus (tokony ho 30 minitra) amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra.
Ny serivisy amin'ny serivisy notontosaina nandritra ny taona maro ho an'ny Gustavus dia omena amin'ny fiaramanidina kely sy charter kely. Fiaramanidina maro no manidina tamba-dian-dàlana izay mampifandray an'i Juneau sy Gustavus ho any Haines, Skagway ary any atsimo atsimo atsinanan'i Alaska. Afaka manampy koa izy ireo amin'ny fampidirana anao any an-taniefitr'i Glacier Bay.
Ny halaviran-dalana amin'ny Juneau mankany Gustavus dia tokony ho 30 minitra.
Nandritra ny fahavaratra dia nijanona tao Gustavus ny Ferry LeConte indroa isan-kerinandro tamin'ny Juneau. Ny dian-dranomandry dia mirefy 9 kilaometatra avy eo amin'ny foiben'ny valan-dresaky Glacier Bay ao Bartlett Cove. Jereo ny tranokala AMHS momba ny fandaharam-potoana, ny fotoana ary ny tahan'ny. Ny mpitsidika koa dia afaka maka sambo na sambo mankany amin'ny valan-javaboary. Ny fitsidihana an-tsambo isan'andro miorina amin'ny zaridaina dia mitarika fitsangantsanganana avy any Bartlett Cove mankany amin'ny ranomandry. Raha manana sambo tsy miankina ianao, dia mety hahazo fahazoan-dàlana sy famandrihan-toerana mba hitondrana azy intoto Glacier Bay.
Saram / fahazoan-dalana
Tsy misy fidirana fidirana mankany amin'ny Glacier Bay. Ny famandrihana dia takiana amin'ny sambo tsy miankina, kamboty, rafting, ary ho an'ny mpitsidika maro hafa. Ireo mpitsidika mitondra ny sambony manokana mankany amin'ny Glacier Bay hatramin'ny 1 jona ka hatramin'ny 31 Aogositra dia tokony hanana fahazoan-dàlana sy famandrihana. Raha mikasa ny hitoby ao amin'ny backcountry ianao dia mila mahazo fahazoan-dàlana malalaka. Ilaina ny fividianana, fahazoan-dalana, ary famandrihana mba hifehezana ny reniranon'i Tatshenshini sy Alsek.
Ny asany ao amin'ny Glacier Bay dia samy hafa amin'ny faritra. Ny mpilalao am-pelantanana dia afaka misafidy amin'ny hiking, camping, tendrombohitra, kayak, rafting, fisakonana, fihazana, avaratr'omby, ary ny fijerin'ny vorona.
Azo atao ny miala voly any amin'ny toerana lavitra kokoa, raha tsy mahita olon-kafa.
Ny Sea Kayaking no fomba tsotra sy malaza indrindra hodiavina any an-taniefitr'i Glacier Bay. Azo atao ao anaty fiara ny tranokala, na trano nohofana, na nomena fitsangantsanganana. Ny fandefasana ny reniranon'i Tatshenshini sy ny Alsek avy any Kanada mankany Dry Bay ao amin'ilay valan-javaboary dia ny dian-dranomamy goavana manerantany amin'ny renirano mirenireny amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo faritra avo indrindra any amin'ny morontsiraka. Na mitondra ny bateriao, mividy mofomamy ianao, na miaraka amin'ny dian-tongotra, dia hisy fipoahana!
Ny sakafom-pivarotana sy ny fiaramanidina dia fomba henjana indrindra hijerena ny valan-javaboary, fa angamba ny valisoa indrindra.
Bartlett Cove: Azonao atao ny mijery ny faritra amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny tarika madinika, na amin'ny ampahan'ny Ranger Naturalist mivantana.
Na inona na inona fomba itiavanao, ny hatsaràn'i Bartlett Cove dia mendrika ny hahita izany.
Tafika Andrefana: Ny sambo andrefan'ny bajabe dia ahitana ny tendrombohitra avo indrindra sy ny sambon'ny ranomandry.
Muir Inlet: Eritrereto ity mekika ity ho an'ny mpilasy. Tena mahatalanjona eto ny toerana sy ny fanatobiana.
White Thunder Ridge: Fientanentanana goavana mamakivaky ity làlana ity no hamaly soa anao amin'ny fomba fijery mahatalanjona an'i Muir Inlet.
Wolf Creek: Raiso ity fitsangatsanganana ity hijerena ny toerana misy rano mamoaka ala mandrakotra ranomandry iray efa ho 7000 taona lasa izay.
Nosy Marmora: toerana tena tsara ho an'ny mpijery vorona. Ireo nosy ireo dia manohana ny zana-boalobok'ireo kiriodra, cormorants, puffins, ary murres.
Misy safidy maromaro ho an'ny trano fialantsasatra rehefa mitsidika ny valan-javaboarin'i Glacier Bay. Glacier Bay Lodge no hany trano ao amin'ilay valan-javaboary. Misokatra manomboka amin'ny tapaky ny volana Mey hatramin'ny fiandohan'ny Septambra.
Ny camping dia misy ao amin'ny zaridaina ao Bartlett Cove. Ny fijanonana ambony dia 14 andro fa ireo izay mikarokaroka toeram-pialan-tsasatra sy kayak, dia misy toerana tsy misy fetra.
Raha mitady trano fonenana bebe kokoa ianao, tsidiho ny Gustavus eo akaiky, ho an'ny trano fandraisam-bahiny, trano fonenana, ary B & B.
Raha mitahiry biby be dia be ny Glacier Bay, dia mety tsy ho ilay toerana tsara indrindra entina mitondra biby fiompy. Afaka avela hipetraka any amin'ny faritra voafidy ny biby, ary mety tsy hijanona mihitsy. Ny biby an-tsokosoko dia tsy maintsy sakanana na voafehy ara-batana amin'ny fotoana rehetra. Tsy avela any amin'ny làlana, tora-pasika, na any amin'ny toeram-ponenany izy ireo, afa-tsy ny biby fiompy izay mijanona ao anaty sambo tsy miankina amin'ny rano.
Ny asany ao amin'ny Glacier Bay dia samy hafa amin'ny faritra. Ny mpilalao am-pelantanana dia afaka misafidy amin'ny hiking, camping, tendrombohitra, kayak, rafting, fisakonana, fihazana, avaratr'omby, ary ny fijerin'ny vorona. Azo atao ny miala voly any amin'ny toerana lavitra kokoa, raha tsy mahita olon-kafa.
Small vs Large: Iza avy ny sambo fiarandalin'i Alaska ho anao?
5 antony tokony hijanonana ao Valdez Alaska
Ny Park National Park Denali sy ny Faritra RV
Ny boky tsara indrindra Travel Books Alaska
Denali National Park Weather and Temperature Temperatures
Fialan-tsasatra tsara indrindra any Angletera
Inona no atao hoe Barbecue an'i Memphis?
Art Gallery & Museums ao Ubud, Bali
5 Instagram Fototeny Instagram mba hanaraka
Febroary 2018 Fety sy zava-miseho any Meksika
Marche Cities Map and Guide
Toeram-pialan-tsasatra sy toeram-pandihizana any Albuquerque
Fandrefesana an'i Pittsburgh amin'ny ririnina
Zavatra atao any Rio Las Vegas
Fomba ahoana no hanalavirana ny mividy ny mividy RV
Fitarainana an-dalamby sy fitsangatsanganana
Aiza i Sri Lanka?
Top Kid-Friendly Restaurants in Oklahoma City